Inkcubeko - Shanghai Shenyong Line Products Co., Ltd
Undoqo kuphuhliso kwenkampani mihla yinto yabantu. Kuphela udibaniso olunamandla lwabasebenzi nga singxamele ixesha elide kunye nophuhliso oluzinzileyo yenkampani. Shenyong abantu ukubambelela "Abantu-ebomini" imodeli yolawulo, kwiintlobo ezahlukeneyo italente ukunika ngeqonga ebanzi yophuhliso nkampani luncedo kakhulu amandla.
Ifilosofi Business: ezakudala okwenyaniso, kwimigudu kunye neenjongo ixesha elide!
Ukuziqhelanisa Employee - sibahloniphe nokuqeqesha abasebenzi bethu, ukubakhuthaza ukuba bathathe inxaxheba kulawulo lweshishini, nesithuba ebanzi kuphuhliso lwabo, ukukhuthaza ukuphakanyiswa kokugqwesileyo kwaye uphephe nezalamane zabo, kwaye ukhuthaze abantu kuwo onke amanqanaba ukuba uFrank evulekileyo.
Customer intlonipho-umthengi uhlala tye, thina sonke ngenxa ngokwanelisa iindwendwe, kwaye sicela abaphathi zesebe ngobuso ngqo unxibelelwano umthengi, ukuqonda iimfuno umthengi lowo, ukubonelela ngcono inkonzo ixabiso umthengi. Thina ukudala umoya yenkcubeko womelele, makhe iindwendwe uzive ngathi ububele ekhaya.
Injongo: Ukubonelela ngenkonzo epheleleyo kubasebenzisi ngokunyaniseka nobulumko.
Iinqobo: Professional ngenxa yozingiso.